Ndị na-ahụ maka Series Yonkis mechara kwụsịchaa | Akụkọ akụrụngwa
Ma ọ bụ na ọ bụrụ na usoro a dum amalitela taa ahịrịokwu ikpe ikpeazụ ga-adị iche kemgbe N'oge a, a na-ewere ebe nrụọrụ weebụ njikọ dị ka mpụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ Yonkis Series a maara nke ọma, Alberto Garcia Sola, Alexis Oepfner Bernardet, Jordi Tamargo Barguño na David Martinez Olivella, ka akwụpụla n'ụgwọ ọ bụla eboro ha. Ikpe a doro anya ma na-ekwu na ha emeghị mpụ ọ bụla megide akụ ọgụgụ isi nke ebubo site na thelọ Ọrụ Ọhaneze na-ebo ha ebubo na ebubo nke onwe ha.
Ihe doro anya bụ na ikpe a ziri ezi maka ha nakwa na ihe ọtụtụ kwuru na a tụrụ ya mkpọrọ maka onye eboro ebubo egosila na ọ bụghị. Ikpe a mara yaOnye ọka ikpe Isabel María Carrillo nke ọnụ ụlọ omekome nke 4 nke Murcia doro anya:
Ekwesịrị m ịhapụ na ịkwụsị Alberto Garcia Sola, Alexis Oepfner Bernardet, Jordi Tamargo Barguño na David Martinez Olivella na nkwupụta okwu ọjọọ niile metụtara mpụ megide akụ ọgụgụ isi nke ndị Ọhaneze na-ebo ebubo na ebubo nke onwe ha, na-ekwupụta na ọ bụ ndị isi. ụgwọ ndị kpatara. N'aka nke ọzọ, ịkọwapụta na egosighi na ndị na-aza ajụjụ nwere ikike ịchịkwa ọrụ ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị nke njikọ ahụ ha bugharịrị, yana ha anaghị akwado oge niile na ọ na-arụ ọrụ ma nye ohere dị irè iji nweta ọdịnaya ihe nkiri. . Achọpụtaghị na ọ nweghị onye n’ime mmadụ anọ ahụ a na-ebo ebubo nwetara ezigbo akụ na ụba sitere na ọnụọgụ nke ihe nbudata nke ihe ọdịyo a na-echekwa echekwara (uru ndị bulitere ya).
N'echiche a, Ọfịs onye ikpe ahụ rịọrọ ka ọ bụrụ akụkụ bụ isi nke ebubo afọ abụọ n'ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ EGEDA na 546 nde euro maka mmebi ahụ kpatara. Ndị ọka iwu na-agbachitere ihe ịga nke ọma n'ịrụ ọrụ ha na gị ahịa e eze hụrụ ikpe banyere mpụ a na-ebo ha. Eziokwu bụ na nke a gaara adị ezigbo iche ma ọ bụrụ na ihe mere eme mere na 1 Julaị 2015, mgbe emegharịrị iwu na nke a, na-ehota ihe ọgụgụ isi.
Njikọ ma ọ bụ njikọ njikọ ahaziri ahazi, nyere iwu na nkewa dịka ọkwa dị iche iche nke ibe weebụ echeghị mpụ n'oge a kọọrọ ha, yabụ ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ha bugharịrị na ọdịnaya echekwara na sava ndị ọzọ, ha anaghị eme mpụ ọ bụla . Ya mere, mgbe ọtụtụ afọ nke onye ọ bụla nọ na-enye echiche ha n'okwu a (nke kachasị mkpa na mba anyị gbasara mpụ na arịa ọgụgụ isi gbalịrị) ikpe ọkàikpe doro anya ma kwenye na onye ọ bụla ebubo na ebubo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ndị ọrụ maka Series Yonkis mechara kwụsịchaa